၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၁-၇ ရက်ထိ – Myanmar Live
၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၁-၇ ရက်ထိ
June 1, 2020 June 1, 2020 - by peeraporn y.
အထင်မှတ်ထားပဲ အလုပ်ပြောင်းကိန်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရကိန်းရှိတယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိပါစေ ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေ မမျှတတာကြောင့် မစုမိမဆောင်းမိဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးသာယာဖြောင့်ဖြူးမည်မဟုတ်ပါ လူလွတ်များ လူပွေလူရှုပ် များနှင့်ဆုံတွေ့ရကိန်းရှိသည်။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေများနေတာကြောင့် အစဉ်လိုက်စီမံခန့်ခွဲတတ်အောင် ကြိုးပန်းပါ။ ငွေအစုလိုက်အပြုံလိုက် ဝင်ကိန်းရှိသည် သို့သော်ကိုင်တွယ်စုဆောင်းမတတ်မှုကြောင့် မကုန်သင့်တဲ့နေရာများမှာငွေကုန်ကြေးကျများရလိမ့်မည်။ အချစ်ရေးသာယာဖြောင့်ဖြူးချင်ရင် တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦးမျှမျှတတ တွေးတောပြောဆိုပြီး နားလည်တစ်ခုရအောင်တည်ဆောက် ပါ။
အလုပ်အကိုင်ကြီးပွားအောင်မြင်တိုးတက်မည်။ နာမည်ကောင်းကျော်ကြားမည် ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသည့်အရင်းအနှီးများမျှ အမြတ်ငွေရရှိမည်။ ကံစမ်းခြင်းမှငွေတိုငွေစရမည် အချစ်ရေးသာယာဖြောင့်ဖြူးပြီး လူလွတ်များကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူနှင့် ဖူးစာဆုံမည်။
အလုပ်အကိုင်ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စရပ်တွေမှာ အမှားအယွင်းရှိနိုင်တာကြောင့် သတိထားဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပါ ပူးတွဲလုပ် ကိုင်သည့်အလုပ်အကိုင်များ ကြီးပွားအောင်မြင်မည်။ ချေးငှားထားသောကြွေးမြီများ ပြန်လည်ရရှိမည် အချစ်ရေးသာယာ ဖြောင့်ဖြူးမည်။ လူလွတ်များ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သူနှင့်ဖူးစာဆုံရမည်။
၄၊ ၅၊ ၈
ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် ကြီးပွားအောင်မြင်ကိန်းရှိသည် သင့်ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကြောင့် မိတ်ဆွေအပေါင်း အသင်းများမည်။ အချစ်ရေးသာယာဖြောင့်ဖြူးမည် တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးနားလည်မှုရှိပါစေ။
၃၊ ၇၊ ၉
လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်အပေါင်းအသင်းများ၏ ကူညီဖေးမမှုတို့ကြောင့် အလုပ်အကိုင်ကြီးပွားအောင်မြင်တိုးတတ်မည် ဝင်ငွေအတည်တစ်ကျဖြစ်မည်။ လူလွတ်များ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သောသူနှင့်ဖူးစာဆုံကိန်းရှိသည်။ ချစ်သူရည်းစားရှိသူများ အသေးအမွှားကိစ္စများကြောင့် စကားများရကိန်းရှိသည်။
၁၊ ၅၊ ၇
အလုပ်ကြောင့်စိတ်ဖိစီးရမည် ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားကိုးနေရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တာကြောင့်လည်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရမည်။ ငွေကြေးဥစ္စာကံမကောင်းတာကြောင့် ငွေကိုချင့်ချိန်သုံးဆွဲပါ အရေးတစ်ကြီးငွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်သုံဆွဲရကိန်းရှိသည်။ လူလွတ်များအထီးကျန်ရဦးမည်။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအမှားအယွင်းရှိနိုင်တာကြောင့် စာရင်းဇယားများကို အချိန်ပေးစစ်ဆေးပါ မှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု တို့ကြောင့် ငွေကုန်ကြေးကျများမည်။ လူလွတ်များအယုံလွယ်တာကြောင့် အချစ်ရေးလိမ်လည်ခံရနိုင်သည်။ ချစ်သူရည်းစား များအချစ်ရေးအဆင်ပြေချောမွေ့မည်။
၂၊ ၆၊ ၉
Previous Article ကလေးမိဘရင်ကျိုး! တနိုင်ငံတည်းသားမာဖီးယားက အသက် ၁၂ နှစ်သမီးကို ခိုးယူပြီး ၅ ရက်ကြာအဓမ္မပြုကျင့်
Next Article ၇ ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း ၂၀၂၀ ဇွန်လ ၈-၁၄ ရက်ထိ